Biosafety calibration mudziyo
ZR-1620 yakahwina zita re "precision particle counter"!
Muna Kukadzi 2022, chiyero chekuenzanisa che "dust particle counter" chakaitwa muChina.Ichi chiitiko chakarongwa neChina Environmental stoichiometry Technical Committee uye Shanghai Institute yeMetrology uye yekuyedza tekinoroji.Inotarisira kuwana huwandu va ...
Chombo chitsva cheanti-denda, mask filtration performance tester chaburitswa!
ZR-1006 Model A (Munyu)/Modhi B(Mafuta) mask yefiltration performance uye airflow resistance tester inoshandiswa pakutarisa kwemhando yepamusoro uye nzvimbo dzekuongorora dzezvigadzirwa zvekurapa, nzvimbo dzekudzivirira zvirwere, machira ekuongorora machira, zvipatara, masiki R&D uye. .
Sayenzi mukurumbira丨Solution yeBiological Safety Cabinet Calibration kubva kuna Junray
JJF 1815-2020 Calibration Speciation yeKirasi ll Biosafety Cabinets Biosafety cabinet (BSC) isimba rakashata rekusefa uye kufefetera kabhineti, iyo inogona kudzivirira anoshanda uye nharaunda kubva kuratidzwa kune biological po...
Certificated quality |Qingdao Junray ZR-1006 ndiyo masiki particulate filtration kunyatsoshanda tester iyo yese paramita inokodzera.
Muna Chikunguru 2020, chigadzirwa chenyeredzi, ZR-1006 Mask Particulate Filtration Efficiency uye Air flow Resistance Resistance Tester Product Sumo Iyo ZR-1006 mask particle filtration performance uye airflow resistance tester yakagadziridzwa yakazvimiririra uye yakagadzirwa neQingdao ...